Macalin Deschamps oo amaanay Kubada uu soo bandhigay Xidiga Pogba ee Xulka Faransiiska
Home Horyaalka France Macalin Deschamps oo amaanay Kubada uu soo bandhigay Xidiga Pogba ee Xulka...
27 jirkaan ayaa muddo dheer ku soo qaatay Old Trafford laakiin tababarihiisa caalamiga ah ayaa ku qancay kubada uu ku soo bandhigay dhanka qaranka.
Tababaraha France Didier Deschamps ayaa amaan weyn u soo jeediyay Paul Pogba ka dib qaab ciyaareedkii Manchester United oo aad u xumaa.
Toosh ayaa saarnaa Pogba toddobaadyadii la soo dhaafay iyadoo ciyaaryahanka khadka dhexe uusan boos ka helin Old Trafford, laakiin wuxuu ka caawiyay Faransiiska inay u soo baxaan finalka Nations League ka dib markii ay ka badiyeen Portugal iyo Sweden .
Deschamps ayaa amaanay ‘hanka iyo tayada’ Pogba, wuxuuna sheegay inuu rajeynayo in qaab ciyaareedkiisa France uu ka caawin doono inuu dib ugu guuleysto booskiisa kooxda Man Utd.
“Kaliya arag waxa uu ka sameyn karay Portugal iyo waxa uu sameeyay caawa,” Deschamps ayaa ku yiri shirkiisa jaraa’id ka dib ciyaartii 4-2 kaga badiyeen Sweden .
Dhanka kale, saaxiibkiisii ​​hore ee khadka dhexe ee Juventus Claudio Marchisio ayaa si cad ugu yeeray Pogba inuu ku laabto kooxda heysata horyaalka Serie A isagoo farriin uu soo dhigay ku yiri “wuu ku farxi doonaa markale” Turin.
Previous articleDaafaca Schalke Malick Thiaw oo ka jawaabay wararka xanta ah ee Xiisihiisa Liverpool
Next articleKooxda Chesea oo u dhaqaaqday badalka xidiga Declan Rice oo ay ku guuldareestay